Isenselogic रेफरल कार्यक्रम
एसईओ रेफरल प्रोग्राम Isenselogic.com द्वारा
Isenselogic.com सबै रेफरलको लागि उदार आयोग प्रदान गर्दछ। तपाइँले कुनै बिक्री गर्न आवश्यक पर्दैन - केवल हामीलाई एक व्यापार लिडको साथ सम्पर्कमा आउनुहोस् जसलाई वेबसाइट डिजाइन वा खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन सेवा चाहिन्छ र हामी बाँकीको ख्याल राख्नेछौं।
हाम्रो रेफरल प्रोग्रामले तपाईंलाई ग्राहकको पहिलो वर्षको १%% भुक्तान गर्दछ।
यदि त्यहाँ एक सम्झौता ठाउँमा छ, हामी तपाईंलाई अगाडि तिर्ने छौं। अन्यथा, हामी तपाईंको भुक्तानी जारी गर्नेछौं चेक मासिक रूपमा आउँछन्।
उदाहरण को लागी, यदि एक रेफरल agreement मासिक सम्झौता मा हस्ताक्षर per ,6००० प्रति महिना, कि एक $ २3,000 चेक तपाईं को लागी बनाइएको, अगाडि छ। र तपाईंको भुक्तान $ 2,700 मा पुग्छ यदि ग्राहकले उनीहरूको प्रारम्भिक सम्झौता भन्दा बाहिर सेवा जारी गर्ने निर्णय गर्दछ भने, हाम्रा अधिकांश ग्राहकहरूले गर्छन्। वैकल्पिक रूपमा, एक ग्राहकले-3,600 मा १२-महिना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्दछ। यसको मतलब त्यो your ,12००० मा तपाईंको नामको जाँच यसमा तपाईंको नाम हो!
रेफरलहरू पत्ता लगाउने ठाउँहरू
मनोरन्जन र मेडिकल मारिजुआना औषधालयहरू
वकील र चिकित्सकको कार्यालय
परिवार वा साथीहरूको व्यवसाय।
तपाईंको ग्राहकहरू, वा तपाईंको फर्मको ग्राहकहरू।
विक्रेताहरू उल्लेखनीय रूपमा खराब SEO र सामग्रीको साथ।
कुनै पनि स्थानीय व्यवसाय जुन गुगलको पहिलो पृष्ठमा हुन चाहान्छ, र ती सबै हुन्।
नेतृत्व गर्दछ जुन तपाईंको फर्मको लागि खराब फिट हो।
कुनै पनि जडान जुन ईन्टेन्ट लक्षित लीड्सबाट फाइदा लिन सक्छ।
चरण १: हाम्रो रेफरल कार्यक्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहोस्
हाम्रो रेजिस्टर लिड फाराम प्रयोग गर्नुहोस् वा तातो परिचयको बारेमा छलफल गर्न सम्पर्कमा आउनुहोस्।
चरण २: सीसा सन्दर्भ गर्नुहोस्
चरण:: भुक्तान गर्नुहोस्
जब हामीसँग अग्रणी संकेतहरू हुन्छन्, तपाइँ भुक्तान हुनुहुनेछ। यो सजिलो छ।
हामी तपाईंलाई अधिक पैसा कमाउन मद्दतको लागि प्रशिक्षण सामग्री प्रदान गर्दछौं।
विश्वको प्रत्येक शहरमा हरेक व्यवसाय तपाई र तपाईको परिवारको लागी आयको एक सम्भावित स्रोत हो। तपाईं यो प्रोग्राम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं घरबाट काम गर्नुहुन्छ वा अतिरिक्त आम्दानीको रूपमा यदि तपाईंसँग काम छ भने।
तपाईंको समर्थन र ईमेल नम्बरको साथ ईमेल समर्थन@isenselogic.com हाम्रो रेफरल सम्झौताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न र तपाईंको तयार हुनको लागि!
हामीसँग हाम्रो हालको ग्राहकहरूको उदाहरणहरू छन् जुन तपाईं प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ।